Etu esi amata ma ọ bụrụ na anyị nwere mbido mbadamba Pi | Akụrụngwa n'efu
Mbadamba Pi Pi na-adịwanye mfe ma dị mfe ịchọta. Ekele maka nnukwu ụlọ ahịa na kọntaktị nke Raspberry Pi Foundation na-eme. Mana ọ bụ eziokwu na mgbe anyị na-abanye na Internetntanetị, anyị na-ahụ bọọdụ nke ọnụahịa dị iche iche yana onyogho dị obere na ihe Raspberry Pi na-abụkarị. Nke a pụtara na mbadamba ndị ahụ abụghị nke mbụ, mana ha bụ mbipụta ma ọ bụ na ha abụghị bọọdụ rasberi Pi na ha chọrọ ire ha n'okpuru aha ahụ.
Ruo ugbu a nnukwu ahịa nke mbadamba osisi Raspberry Pi apụtaghị, mana ha dị adị. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji gwa gị otu ị ga - esi mara ma anyị nwere bọọdụ Rasberi Pi mbụ ma ọ bụ na - enweghị.
Nke mbu anyi gha amata ebe efere si. Akpa mbadamba Pips kwuru "Emere na China", ma emesịa mmepụta ahụ kwagara United Kingdom na n'ụdị dịka Raspberry Pi 3 ma ọ bụ 2 anyị ga-ahụ n'otu akụkụ akara nke "Mere na UK".
Boardlọ osisi Rasberi mbụ bụ nke nwere Broadcom SoC mgbe niile
Ihe nke abuo anyi kwesiri ile anya bu ihe nlere nke strawberry yana nwebisiinka nke Raspberry Pi. Ihe ndị a dị mkpa na ụdị ọhụụ niile nke mbadamba mbụ nwere ya, mana ọ bụ ihe nwekwara ike ịbụ faked. Otu ihe a anaghị eme na mbipụta nke SoC. Broadcom bụ Rasberi Pi SoC, ya mere ihe ọ bụla ọzọ SoC na-egosi na anyị na-eche adịgboroja. Ọ bụghị naanị na anyị ga-ahụ akara ngosi Broadcom ma n'okpuru anyị ga-ahụ koodu ga-amalite site na leta BCM.
Akara nke OA na FCC bu ihe ndi anyi aghaghi ile anya. Nkọwa okwu CE na-egosi na ọ bụghị naanị na Europe ka e kesara kama na ha na-agbaso ihe niile dị mma nke European Union chọrọ, mbido mbụ nke Raspberry Pi na-agbaso ya, yabụ na anyị ga-achọ akara ahụ. Anyị kwesịkwara ịchọta nọmba njirimara FCC, ihe na-adịghị emetụta ụmụ amaala Europe ma nke ahụ mbụ Ras osisi Pi osisi na-eme.
Iche ọdịiche dị n'ụgbọ osisi Raspberry Pi na adịgboroja bụ ihe dị mfe, mana ọ bụkwa ihe anyị na-anaghị atụle ma ọ nwere ike ịkpatara anyị nsogbu, dịka nhazi adịghị mma, ọrụ dara ma ọ bụ naanị na bọọdụ ahụ na-ere ọkụ n'ihi enweghị ike njikwa. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị ka anyị ga-ege ntị ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka ha nye anyị ezi maka oke bekee Not cheghị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Etu esi amata ma ọ bụrụ na anyị nwere mbadamba utu mbụ